Paing Dental Clinic | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Paing Dental Clinic | Dagon
Paing Dental Clinic
Paing Dental Clinic ကို အမှတ် ၅၉စီ၊ မြေညီထပ် ၊ ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်း ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ Laser Whitening ဖြင့်သွားများကို ဖြူ ဖွေး လှပအောင်ပြု လုပ်ပေးခြင်း ၊သွားကျဲ ခြင်း သွားထပ်ခြင်း သွားခေါခြင်း မေးရိုးရှေ့ထွက်ခြင်း များကို ညီညာလှပအောင် Orthodontics ဆရာများကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ အထူးပြု ပြင်ပေးခြင်း ၊အံကပ်အပျော့ ပြု လုပ်ပေးခြင်း ၊Special Night Guard ပြု လုပ်ပေးခြင်း ၊ ဘေးသွားများ
အကူအညီမလိုပဲ ကြွေသွားများ စိုက်ပေးခြင်း၊ သွားကို စိန်ဖြင့်အလှဆင်ပေးခြင်းတို့အပါအဝင် သွားနှင့်ခံတွင်း ရောဂါ အမျိုးမျိုးတို့ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ရာနှုန်းပြည့် ပိုးမွှားသန့်စင်မှု အသုံးပြု ပြီး ၀ါရင့်ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင်ကုသပေးနေပါသည်။ ဆေးခန်း ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၉ နာရီခွဲမှ ည ၉ နာရီ အထိဖြစ်ပြီး ပိတ်ရက်မရှိပါ။
No 59 C, Ground Floor, Bo Yar Nyunt Road, Dagon Township, Yangon
Paing Dental Clinic is located at No 59 C, Ground Floor, Bo Yar Nyunt Road, Dagon Township, Yangon. The clinic offers various dental treatments and services such as root canals, implant crowns and bridges, fillings, veneers, cleaning, laser whitening, invisalign and braces, special night guard, post and core system for all genders. Opening Hours is 9:00 AM to 9:00 PM for all days. Doctors are very friendly and kind and you are invited to visit to care your tooth.